कुनै बेला एयरहोस्टेस थिइन् 'बिग बोस १२'मा आउन लागेकी यी अभिनेत्री, हिना खानको भन्दा डबल हुनेछ पारिश्रमिक ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»हलिवुड/बलिवुड»कुनै बेला एयरहोस्टेस थिइन् ‘बिग बोस १२’मा आउन लागेकी यी अभिनेत्री, हिना खानको भन्दा डबल हुनेछ पारिश्रमिक !
By मनिषा थापा on ३१ भाद्र २०७५, आईतवार १०:५८ हलिवुड/बलिवुड
पिएनपिखबर, भक्तपुर : ‘बिग बोस १२’को शो आज रातीबाट दर्शकलाई मनोरन्जन दिनको लागि तयार छ। आज राति अर्थात आइतबार बिग बोस १२ शोको प्रिमियर एपिसोड अन एयर हुन जादै छ।
प्रीमियरमा घरमा एंट्री गर्ने कन्टेस्टको नाम पर्दाबाट उठ्नेछ। हालैमा प्रिमियरभन्दा पहिले शोको प्रतिस्पर्धीहरुको अफि‍शि‍यल लिस्ट जारी गरिएको छ। यस लिष्टमा टिभी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़को नाम पनि कन्फर्म गरिएको छ। बिग बोस १२ शोमा इन्ट्री गर्न लागेकी दीपिका कक्कड़को जिन्दगीसँग जोडिएका केहि रहस्य…
टिभी सिरियल ‘ससुराल सिमरका’मा सिमरको भूमिका निभाएकी दीपिका कक्कड़ बिग बोसको घरमा सेलिब्रिटीको रुपमा प्रवेश गर्न जादै छिन्। यस अघि डान्स रियलिटी शोमा पनि भाग लिईसकेकी थिइन।
दीपिकाले जेट एयरवेजमा एयरहोस्टेसको रूपमा आफ्नो करियरको शुरुवात गरेकी थिइन्। उनले आफ्नो एक साथीसँग विवाह गरेकी थिइन्। तर त्यस विवाह धेरै समय चल्न सकेन र २०१५ जनावरीमा उनको सम्बन्ध विच्छेद भयो। त्यसपछि दिपिकाले टिभी इंडस्ट्रीमा पहिला शो “देवी”बाट अभिनेत्रीको रुपबाट करियरको शुरुवात गरेकी हुन्।
थोरैलाई मात्र थाहाँ होला की दिपिका अभिनय अगाडी फरक पेसामा सक्रिय थिइन्। दिपिका अभिनेत्री बन्नु अघि एयर होस्टेस रहेकी थिइन्। ‘ससुराल सिमर’को सेटमा उनको भेट शोएब इब्राहि‍मसँग भएको थियो। त्यसै क्रममा दुवैबीचमा प्रेम भयो र यसै वर्ष उनीहरुले विवाह गरे। दीपिका विवाहपछि इस्लाम कबुललाई लिएर पनि चर्चामा थिइन्। धर्म परिवर्तनलाई लिएर केहि फ्यानहरुले आलोचना पनि समेत गरे।
बिग बोसमा दीपिकाको एंट्रीलाई लिएर यस कुराको खुब चर्चा भईरहेको छ र यस शोको लागि दिपिकाको फीस एक्स कंटेस्टेंट हिना खानकोभन्दा बढी हुने खबर छ । सुत्रको अनुसार हिनालाई हरेक हप्ता ८ लाख दिएको खबर आएको थियो भने दिपिकालाई हप्ताको १७ लाख दिने चर्चा व्यापक छ।
बिग बोस बाहेक दीप‍िका कक्कड़ बलिउडमा पनि डेब्यू गरिसकेकी छिन्। यस महिना ७ सेप्टेम्बरमा रिलिज भएको फिल्म पल्टनमा पनि देखिएकी थिइन्।